जसरी कमलको बीउमा भविष्यको कमल हुन्छ, त्यस्तै मानिसको रूपमा मानवजातिको पूर्ण प्रकारलाई लुकाइन्छ। यस प्रकारको बेग्लाबेग्लै तरीकाले गर्भधारण गर्नुपर्दछ, त्यसपछि यसको कुमारी शरीरको माध्यमबाट जन्म। यसरी जन्मेका प्रत्येक मानिस संसारको मुक्तिदाता हुन्छन् जसले अज्ञान र मृत्युबाट बचाउँछ।
यो पुरानोको बारेमा भनिएको थियो: यो शब्द हरायो: यो शरीर भयो। मुक्तिदाताको ब्यूँताइको साथ हराएको शब्द भेट्टाइनेछ।
Vol। 1 सेप्टेम्बर, 1905। नम्बर 12
प्रतिलिपि अधिकार, 1905, HW PERCIVAL द्वारा।
प्रामाणिक पदार्थ डिजाइन वा फारम को सिद्धान्त बिना अन्तरिक्ष मा व्यवस्थित संसारहरु मा सुसंगत परिस्थितिको माध्यम बाट विकसित हुन सक्दैन।
फारमको एक सिद्धान्त बिना सरल पदार्थ संयुक्त र ठोस फार्ममा विकसित हुन सक्दैन। पृथ्वी, बोटबिरुवा, र जनावरहरूको तत्त्व बाहेक कुनै त्यस्तो सिद्धान्त जारी राख्न सक्दैन। पृथ्वी, बोटबिरुवा र पशुहरूका तत्त्वहरू विना सिद्धान्त विघटन गरेर तिनीहरू देखा पर्ने त्यो प्राथमिक अवस्थामा फर्कने थियो। फारमद्वारा पदार्थ प्रयोगको लागि अनुकूलित छ, र फाराम मार्फत राज्यबाट राज्यमा प्रगति गर्दछ। सबै बल पदार्थ हो, र सबै कुरा बल, बल र पदार्थ हो कुनै कार्यको विमानमा समान पदार्थको दुई बिरूद्ध। उच्च विमानमा आत्मा हाम्रो विमान मा मामला हुन्छ, र हाम्रो विमान को मामला मा आत्मा बन्नेछ। सरल प्राथमिक पदार्थदेखि लिएर, हाम्रो संसार र यसभन्दा पछाडि, आध्यात्मिक बौद्धिकतासम्म, सबै पदार्थ र आत्मा मिलेर बनेको हुन्छ, वा "बल" ले कसैलाई आत्मा भन्न रुचाउँछन् - तर उनीहरूको कार्यका सातवटा विमानहरू छन्। हामी भौतिकमा बाँच्न सक्छौं, भौतिकताको बिन्दुमा सबैभन्दा कम, तर विकासको बिन्दुमा होइन।
कुनै पनि कार्यको विमानमा फारम एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त हो र एक सिद्धान्तको रूपमा, फाराम सातवटा विमानहरूमा प्रत्येकले सञ्चालन गर्दछ। त्यहाँ सास-रूपहरू छन्, जुन दिमागले भौतिक जीवनमा प्रारम्भिक प्रवेश गर्न प्रयोग गर्दछ; जीवन रूपहरू, जुन जीवनको महान् सागरले प्रकट विश्वहरूमा आफ्नो शक्ति स्थानान्तरण गर्न प्रयोग गर्दछ; सूक्ष्म रूपहरू जुन सबै शक्ति र फार्महरूका लागि फोकस वा बैठक ग्राउणको रूपमा प्रयोग हुन्छन् जुन कुमालेको पा wheel्ग्रा जस्तो दिमागले काम गर्दछ। शारीरिक यौन-रूपहरू, जुन सन्तुलन वा सन्तुलन चक्रको रूपमा प्रयोग गरिन्छ जसको माध्यमबाट दिमागले शिष्टता, निःस्वार्थ भाव, र मिलनको रहस्य जान्छ; इच्छा-रूपहरू, जसले रूपरेखा, कल्पना, र पशुवर्गमा उनीहरूको प्राकृतिक विकास अनुसार चाहनाहरूलाई वर्गीकृत गर्दछ; चिन्तन-रूपहरू - मूर्तिकारहरू, चित्रकारहरू र अन्य कलाकारहरूद्वारा भौतिकीकृत — जसले दिमागको चरित्रलाई चित्रण गर्दछ, मानवताको आदर्शलाई जनाउँछ, र नयाँ व्यक्तित्वको रूप निर्माण भएको अनुसार अवशेष वा बीजको रूपमा काम गर्दछ; व्यक्तिगत-रूप, जो चरित्र वा अहंकार हो जुन जीवन देखि जीवन सम्म निरन्तर रहन्छ, विकासको कुल योगमा। जब व्यक्तिगत-रूपले यसको विकासको चक्र पूरा गर्दछ यो उमेरहरू मार्फत फाराममा अमर हुन्छ र आवश्यक पर्दैन। यो पूर्ण हुनु अघि, जे होस्, यसको फारम परिवर्तनको विषय हो। त्यहाँ कहिले काँही आरोहण मापन को रूप मा आदर्श फार्महरु छन्, यद्यपि यो अब लाभदायक नहुन सक्छ तिनीहरूको बारेमा अनुमान गर्न।
मानव भौतिक शरीर स्थायी देखिन्छ, तर हामी जान्दछौं कि यो बनाएको सामग्री लगातार फ्याँकिएको छ, र त्यो अन्य सामग्री फोहर टिशूहरू बदल्नको लागि प्रयोग गर्नुपर्दछ। छाला, मासु, रगत, बोसो, हड्डीहरू, मज्जा, र स्नायु शक्ति, प्रयोगको रूपमा प्रतिस्थापन गर्नुपर्दछ, अन्यथा शरीरको अपव्यय हुन्छ। यस उद्देश्यको लागि प्रयोग गरिएको खाना हामी के खाने, पिउने, सास, गन्ध, सुन्न, हेर्नुहोस्, र सोच्दछौं त्यसबाट बनेको छ। जब खाना शरीरमा लिइन्छ यो रगत प्रवाहमा जान्छ जुन शरीरको शारीरिक जीवन हो। सबै गर्न सकिन्छ कि जीवन प्रवाह द्वारा अवशोषित र टिश्युमा रगत द्वारा जम्मा गरिएको छ, वा जहाँ आवश्यक छ। सामान्य शारीरिक प्रक्रियाको सब भन्दा ठूलो चमत्कार भनेको खाद्य सामग्रीको आत्मसात पछि कणहरू कोषमा निर्माण हुन्छन् जुन सम्पूर्ण रूपमा शरीरका अंग र अंगको स्वरुपमा मिलाइन्छ। यो कसरी सम्भव छ कि जीवित र बढ्दो शरीरको जीवनकालमा यसको रूपको रूपमा व्यावहारिक रूपमा अपरिवर्तित रहन कसरी सम्भव छ, जबसम्म यसको निर्माणमा प्रयोग गरिएको कुरा फार्ममा निश्चित डिजाइन अनुसार ढालिएको र होल्ड गरिएको हुँदैन।
जसरी हाम्रो शरीरमा रक्त प्रवाहले यसका सबै चीजहरूलाई सञ्चारमा राख्दछ त्यसैले ब्रह्माण्डको शरीरमा जीवन प्रवाह बग्दछ जसले सम्पूर्ण कुरालाई निरन्तर परिसंचरणमा राख्दछ। यसले दृश्यलाई अदृश्यमा कम गर्दछ र फेरि अदृश्यलाई देखिनेमा विघटन गर्दछ कि यसको प्रत्येक भाग फार्म मार्फत पूर्णतयामा अगाडि र माथी काम गर्न सक्छ।
हामी हाम्रो वरिपरि असंख्य फार्महरू देख्छौं, तर हामी विरलै सोधपुछ गर्छौं कि भौतिक तत्वहरूले कसरी देख्छन् जुन उनीहरूले देख्छन्; चाहे फारम र सकल पदार्थ समान छन्; के रूप हो; वा किन दिइएको फारम उही प्रजातिमा रहिरहन्छ?
सकल पदार्थ फार्म हुन सक्दैन, अन्यथा यो सजीलै परिवर्तन हुँदैन; वा यदि यो परिवर्तन भयो भने यो कुनै विशेष प्रकारमा परिवर्तन हुनेछ। फारम स्थूल पदार्थ हुन सक्दैन वा यो पदार्थको रूपमा परिवर्तन हुने छ, जबकि हामी देख्छौं कि प्रत्येक शरीरले आफ्नो फाराम सुरक्षित राख्दछ, यद्यपि शरीरको रूपलाई सुरक्षित राख्न पदार्थको निरन्तर परिवर्तनको बाबजुद। हामी स्थूल पदार्थ देख्छौं, र हामी यो देख्छौं जुन त्यो हो। यदि हामीले स्थूल पदार्थ देख्यौं, र हामी त्यसलाई फारममा देख्छौं, र स्थूल पदार्थ रूप होईन, न त रूप ग्रॉस मेटर हो, तब हामी यस कुरालाई बाहेक अरू रूप देख्दैनौं। यस प्रकार, तर आफैमा अदृश्य भए पनि, पदार्थको सहायताले मात्र दृश्यतामा आउँदछ, तर एकै साथ यसले वस्तुलाई देख्न, र दृश्यताको माध्यमबाट तल्लो राज्यहरूमा आफ्नो विकास संकेत गर्न सक्षम गर्दछ; दिमागको शिक्षा को लागी एक वाहन को रूप मा सेवा गर्न; र यसैले दिमागसँग सम्पर्क गरेर आफ्नो प्रगतिमा सहयोग पुर्‍याउन।
प्रकृति स्वरूपहरू जुन हामीले देख्यौं त्यो अधिक वा कम सही प्रतिलिपिहरू हो आदर्श फारमहरूको सूक्ष्म प्रतिबिम्बको। जीवन सूक्ष्म फारमको डिजाइन अनुसार निर्माण गर्दछ र समयक्रममा फारम हाम्रो विश्वमा देखा पर्दछ।
फारमहरू क्रिस्टलाइज्ड विचारहरू हुन्। एक क्रिस्टल, एक छेपारो, वा विश्व, प्रत्येक फारमको माध्यमबाट दृश्यतामा आउँदछ, जुन क्रिस्टलीकरण गरिएको विचार हो। जीवनभरका विचारहरू मृत्यु पछि क्रिस्टलाइज हुन्छ र बीज प्रदान गर्दछन्, जब उचित समय आउँदछ, नयाँ व्यक्तित्वको रूपमा बनाइन्छ।
पदार्थ, चित्र, र र,, गठन गर्न तीन आवश्यकहरू हुन्। पदार्थ फार्मको शरीर हो, यसको सीमा र सीमा फिगर गर्नुहोस्, र यसको चरित्र रंग गर्नुहोस्। सही परिस्थितिमा फारामले जीवनको अंशलाई अवरोध गर्दछ, र जीवन बिस्तारै आफैंमा रूप निर्माण गर्दछ र देख्न मिल्छ।
फार्महरू दिमागलाई पासोमा पार्ने र भ्रम गर्ने उद्देश्यका लागि अवस्थित छैन, यद्यपि फारमहरू दिमागलाई पासोमा पार्छन् र भ्रममा पार्दछन्। यो वास्तवमै दिमागले आफैलाई भ्रम गर्दछ र आफैलाई रूपको साथ भ्रममा पार्न अनुमति दिँदछ, र दिमागले भ्रममा निरन्तर रहिरहनुपर्दछ जबसम्म यसले रूपहरू र रूपहरूको उद्देश्य देख्दैन।
फारमको उद्देश्य भनेको क्षेत्र, प्रयोगशालाको रूपमा सेवा गर्नु भनेको अन्तर्निहित बौद्धिकताले काम गर्नु हो। यसको वास्तविक मूल्यमा फारामको कदर गर्न, र जुन अंश हामीले बौद्धिक सिद्धान्तको विकासमा लिइरहेका छौं जुन हामी कुरा गर्छौं दिमाग, हामीलाई थाहा हुनुपर्दछ कि त्यहाँ दुई पथहरू छन्: फारमको मार्ग र चेतनाको मार्ग। यी मात्र पथहरू हुन्। केवल एक छनौट गर्न सकिन्छ। कोही दुबै यात्रा गर्न सक्दैनन्। सबैले समयमै छनौट गर्नुपर्नेछ, कसैले पनि इन्कार गर्न सक्दैन। छनौट विकास जस्तै प्राकृतिक छ। यो जीवन मा एक को अन्तर्निहित मनसाय द्वारा निर्णय छ। पथ छनौट, यात्रुले यात्रा गर्दा उहाँ पूजा गर्दछ। रूपहरूको बाटो अगाडि र माथि जान्छ, शक्ति र महिमाको उचाइहरूमा, तर अन्त विनाशको अन्धकार हो, किनकि सबै रूपहरू सजातीय पदार्थमा फर्कन्छन्। प्रारम्भिक इच्छाबाट केही फार्म प्राप्त गर्न वा हुनको लागि, पास हुनको लागि वा फारम द्वारा अवशोषित हुने इच्छाको लागि; ठोस शारीरिक कब्जा को इच्छा बाट, एक व्यक्तिगत भगवान को आदर्श पूजा गर्न; रूपहरूको मार्गको अन्त्य सबैका लागि एक समान छ: व्यक्तित्वको विनाश। ठूलो फारम सानो सोस्छ, रूप शारीरिक वा आध्यात्मिक हुन, र पूजा प्रक्रिया हतार गर्दछ। मानव दिमागले पूजा गर्ने ठोस रूपहरूले आदर्श रूपहरूको पूजा गर्न ठाउँ दिन्छ। साना देवताहरू ठूला देवताहरू र यी ठूला देवताहरू द्वारा समाहित हुन्छन्, तर देवताहरू र ईश्वरका देवताहरूले, अनन्तकालको नजिकमा, एकसमान पदार्थमा समाधान गर्नुपर्दछ।
इच्छा, महत्वाकांक्षा, र धन, दुनिया को माध्यम बाट नेतृत्व र दुनिया को औपचारिकता। विश्वको औपचारिकताहरू ठोस रूपका अमूर्त आदर्शहरू हुन्। समाज, सरकारको, चर्चको औपचारिकताहरू, दिमागमा यथार्थ हो र उनीहरूको आदर्श रूपहरू निश्चित रूपले अवस्थित छन् जुन फार्महरू अवस्थित छन् जसद्वारा महलहरू, क्याथेड्रलहरू वा मानवहरू निर्माण गर्दछन्।
तर ठोस रूपहरू, र समाज, सरकार, र धर्महरूको औपचारिकताहरू, नाश गर्नु खराब छैन। फारम मूल्यवान छ, तर डिग्रीको अनुपातमा मात्र यसले चेतनाको बोधमा सहायता गर्दछ। केवल यसले चेतनाको प्रगतिलाई सहयोग गर्ने रूपमा यो वास्तवमै मूल्यवान छ।
चेतनाको बाटो चेतनाको सचेत उपस्थितिबाट सुरू हुन्छ। यो जारी रहन्छ र यो बोधसँग फैलिन्छ, र सबै रूपहरू र विचारलाई समाधानमा चेतनामा। यसले एक्लोपनमा पु .्याउँछ, जुन संसारको रूपहरूको बिच एक बिन्दुको रूपमा हुन्छ। जब एक व्यक्ति स्थिर, निर्भय र एक्लो-नेसको बिन्दुमा चिन्ता बिना रहन सक्छ, त्यहाँ यो रहस्य छ: एक्लो नेसको बिन्दु विस्तार हुन्छ र चेतनाको एकल-नेस बन्छ।
संसारको जीवन प्रवाहमा प्रवेश गर्दै, आफूलाई ग्रॉसर र डेन्सर पदार्थमा समेटेर, इन्द्रियमा डुब्छ र भावनाहरूद्वारा बिर्सन बिर्सिन्छ, दिमागलाई घेरामा राखिन्छ, भित्र पस्छ, बन्धनमा रहन्छ र एक कैदी समातेर समातिन्छ। इन्द्रिय, भावना र रूपहरू, दिमागका विषयहरू हुन् - ती वास्तविक सृष्टिकर्ता - तर यसको अधीनमा तिनीहरू असमर्थ छन्, विचलित भएका छन्, र आफ्नो राजालाई इच्छुक बन्धनमा राखेका छन्। इन्द्रियहरु काल्पनिक वास्तविकताहरुमा बढेको छ, इन्धनको स्ट्याण्ड भन्दा बलिया छन् कि भावनाहरु को दिमाग अदृश्य डोरीहरु को बारे मा बनाएको छ, तर यति नाजुक छ कि तिनीहरू को रूप मा बनाइएको छ कि तिनीहरू जीवन मा प्रिय छ कि सबै संग एकै लाग्न, जीवन को लागी ।
रूप अब भगवान हुनुहुन्छ; यसको मुख्य पूजाहारीहरू इन्द्रिय र भावनाहरू हुन्; दिमाग तिनीहरूको विषय हो, यद्यपि उनीहरूका सिर्जनाकर्ता। फारम व्यवसाय, समाज, र राष्ट्रका परमेश्वर हुनुहुन्छ; कला, विज्ञान, साहित्य, र चर्चको।
कसले ईश्वरप्रति निष्ठा त्याग्न हिम्मत गर्छ? कसले जान्छ र हिम्मत गर्छ र इच्छा गर्छ, त्यसले झूटो देवतालाई आश्रित गर्न सक्छ र यसलाई अन्वेषकमा प्रयोग गर्न सकिन्छ; बन्धकलाई शार्क गर्नुहोस्; उहाँको ईश्वरीय उत्तराधिकार दावी गर्नुहोस्; र बाटो सुरु गर्नुहोस् जुन चेतनाको सबै-एक-नेसमा पुग्दछ।